Iibhatyi ezisisiseko, utyalo mali olugqwesileyo ngexesha lokuthengisa | Amadoda aQinisekileyo
UMiguel Serrano | | Ihlaziywe 05/07/2017 14:17 | fashion, Imizila
Ngenye ihlobo, iivenkile zeempahla zinciphise amawaka eempahla kunye nezinto ezincedisayo. Lixesha elihle lokutyala imali, kodwa hayi kuyo nayiphi na into enexabiso eliphantsi ephela ilahlekile kwidrowa. Fumana iziqwenga onokuzisebenzisa yonke imihla, Njengeebhatyi ezisisiseko.
Ibhombu, idenim kunye neebhatyi zesikhumba ziibhatyi ezibalulekileyo kwimpahla yabesilisa. Zonke ezi ntlobo zintathu zeziqinisekiso iindlela ezininzi zokudibanisa isitayile kunye nePhakamileyo / ephantsi, ngakumbi ngexesha lekhefu, Oko kukuthi, kwiinyanga nje ezintathu.
I-H & M.
Ikhaki, emnyama, umkhosi wenqanawa okanye ibhatyi eluhlaza yesanti (umbala omtsha osisiseko) ngexesha layo inokubiza i-euro ezingama-50 okanye nangaphezulu. Ngoku kukho ezinye ezingaphantsi kwesiqingatha sexabiso lazo, njengoko kunjalo kule modeli ye-H & M yakudala: i-14.99 euros.
Ayinamsebenzi ukuba ihlanjiwe okanye i-indigo, njengale modeli yakwa-Antiyokwe ifumaneka eTopman (ngaphambili yayingu- € 90, ngoku ingama-38 euros), ukuba awukabinayo ibhatyi yesiseko yedenim, awusoze uzisole ngotyalo-mali lwakho. Ngaphantsi kwexesha lokuthengisa. Yongeza ijini, iiteki kunye nesikipa osithandayo kwaye ujongeka ungenasiphoso unyaka nonyaka. Ayize iphelelwe lixesha.
Ngekhola evulekileyo kunye ne-zipper, ibhatyi yesithathu esisiseko apho sikukhuthaza ukuba utyale ezi ntengiso zasehlotyeni ibhatyi yebhayisekile. Khangela umgangatho olungileyo nowamkelekileyo Kwaye uya kuba nesiqwenga, ngalo lonke ixesha usibeka, siya kukunika istayile somoya ngelixa usenza ukujonga kwakho kudibanise amanqaku amaninzi ngesibetho. Yidibanise nejean ezibhityileyo kunye neebhutsi zaseChelsea ukuze wenze uninzi lweempawu ezinzima. Oku kuxabisa i-euro ezingama-25.99; Ixabiso langaphambili lalingama-euro angama-59.95.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Ukuthengiswa kwehlobo: Izizathu zokuTyala imali kwiibhatyi ezisisiseko
Ukubaluleka kokuba neesaladi ehlotyeni